सम्बन्ध विच्छेद गरी छुट्टै बसेकी श्रीमतीले श्रीमानलाइ मध्यरातमा फोन गर्दै भनिन्, ‘ए.. हजुर ! प्रेसरको दबाइ लिइरहनुभएको छ नि ?’ – Online Khabar 24
November 4, 2021 by admin admin
हरेक मध्येरातमा एक नम्बरबाट उनलार्ई मिसकल आइरहेको हुन्छ, तर कसको नम्बर होला भनी उनी फोन फर्काउँदैनन् बरु कसैको नम्बर झुक्किएर आयो होला भन्ने सोच्छन् ।
एक दिन होइन दुई दिन, तीन दिन लगातार मिसकल आइरहेको हुन्छ । सातौँ दिनको मध्यरातमा फेरि मिस कल आउँछ र उनकी छोरीले ‘बाबा हजुरको नम्बरमा मिलकल आइराछ’ भन्छिन्, तर ‘कसैले झुक्किएर गरेको होला, छोड्देउ छोरी’ भन्छन् उनी ।
बाबा, छोरी, छोरा सबै सुत्छन् । सोही रात फेरि मिसकल आउँछ । ’अब त भएन है यसलार्ई थर्काउनु पऱ्यो भन्दै छोरी र छोराले फोन फर्काउन खोज्छन्, बाबाले फोन लिँदै ‘म कुरा गर्छु को रहेछ यति राति सधैं मिस कल गर्ने’ भन्छन् ।
तीनैजना एकसाथ चियाखाजा खाँदैछन् । छोराछोरीलाई कौतुहलता हुन्छ, बाबालाई राति कसको मिसकल आउँछ भनेर बुझ्नलार्ई, र हिम्मत गरेर सोध्छन्- ‘बाबा हजुरलाई कसको मिसकल आउँछ मध्यरातमा.. हामीलाई भन्नुस् न, फेरि हामी खाना पनि खाँदैनौँ नि !
’ बच्चाहरू जिद्दी गर्छन् । उनीहरूको जिद्दीको अघि बाबाको केही चल्दैन । उनी वास्तविकता खोल्न बाध्य हन्छन्– ‘मध्यरातमा सधैं मिस कल आउने तिमीहरूको आमाको हो ।’
हरेक दिन बिहान–बेलुका बच्चाहरू आफ्नो बाबासँग कुरा गर्छन् । ‘बाबा खाजा खाइस्यो ? के खाइस्यो ? हामीलाई लिन कहिले आउने ?’ यो सबै कुरा आमाले देखिरहेकी हुन्छिन् । बच्चाहरू सानै छन् । उनीहरूलाई थाहा छैन कि आफ्नो आमाबाबाले सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् भनेर ।
उनीहरूलाई मानसिक असर पुग्न सक्छ भन्दै परिवारजनले केही भनेका हुँदैनन् । तर ती बच्चाहरू हरेक दिन ‘बाबा खै बाबा खै’ भन्दै आमासँग पिरिरहेका हुन्छन् । आमाले बच्चाहरूलाई फुस्ल्याउन सक्दिनन् । यसो गर्दागर्दै झण्डै एक वर्ष बित्यो । तर बच्चाहरू आफ्नो बाबालाई सम्झिरहेका हुन्छन् । स्कुलमा छुट्टि हुनेबित्तिकै ‘बाबा लिन आइसिन्छ’ भन्दै गेटतिर दौडिन्छन् त कहिले फोन गर्न खोज्छन् । तर बाबाले मोबाइल नम्बर परिवर्तन गरेका हुन्छन् । ती बच्चाहरू बबा–बाबा भनेर छटपटाइरहेका हुन्छन् ।
जिल्ला अदालत ललितपुरको गेटनिर एक महिला र पुरुष बच्चाहरूको विषयमा आफूहरूले समझदारी बनाउनुपर्ने भन्दै सल्लाह गरिरहेका हुन्छन् । सम्बन्ध विच्छेद भएपछि आफ्ना साना बच्चालाई आफैले हुर्काउने र कानूनले पनि वालिग नहुँदासम्म आमाकै जिम्मामा सन्तान रहने व्यस्था गरेअनुरुप आफैले सन्तानलाई हुर्काउँदै आइरहेको महिलाले भनिरहेकी हुन्छिन् ।
तर त्यो क्रममा बच्चाहरूले बाबा खोज्ने हामीलाई बाबानिर लैजानु भनेर दुःख दिँदै आइरहेका हुन्छन् र यही बच्चाहरूको कारण पनि आफूहरू एक हुन आवश्यक रहेको पूर्वपतिलाई भनिरहेकी हुन्छिन् । तर पति अब विच्छेद भएको सम्बन्धलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने तर्क दिइरहेको हुन्छ । पति–पत्नीको सम्बन्ध विच्छेदका दिन पत्नीले पतिलाई भनेका शब्दहरू ती पुरुषले सम्झिरहेका हुन्छन् । तर महिला फेरि सम्बन्ध बढाउनेतर्फ बोलिरहेकी हुन्छिन् ।
हामीले अहिलेसम्म सम्बन्धविच्छेदको घटना धेरै सुनेका र देखेका पनि छौँ । यो कस्तो क्षण हो तपाईं–हामी सजिलैसँग भन्न सक्छौँ । जीवनभर दुःख–सुखको कसम खाने जोडी एक्कासी आएर कसरी विच्छेद हुने अवस्थामा पुग्छ ? पति र परिवारको यातनाको कारण पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पुगेका घटना हामीले सर्वत्र पाउन सक्छौँ । उमेर नपुगी विवाह हुने, एकअर्काको कुरा नमिल्ने, एक पक्षले अर्कोलाई दबाउन खोज्ने जस्ता यावत घटनाक्रमको अन्तिम बिन्दु सम्बन्ध विच्छेद नै हुने गरेको छ । यसर्थ सम्बन्ध विछेच्द हुने अवस्थाहरू फरक–फरक छन् ।
समयक्रमसँगै कुरा सम्बन्ध विच्छेदमा मात्रै सीमित भएन, विच्छेदपछिको सम्बन्ध पनि जोडिन सक्ने सम्भावनाहरू आउँदोरहेछ । तर यस्तो प्रकारको सम्बन्ध बहुत कममा देख्न सकिन्छ । त्यसमध्ये माथिका दुई उदाहरण हुन् । यस्तो घटना हामीलाई नयाँ लाग्न सक्छ जुन तपाईं–हाम्रो कल्पनामा सामान्यतया आउँदैन ।
प्रस्तुत दुई घटनाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि विच्छेदपछिको सम्बन्ध जोडिन सक्छ ! कागजी रूपमा सम्बन्ध विच्छेद भए तापनि मन त विच्छेद नहुँदोरहेछ । यहाँ बच्चाहरूको कारण या क्षणिक आवेशमा आएर सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय लिन पुगेका जोडी फेरि पनि मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । हाम्रो कानूनमा सन्तान बालिग नहुँदासम्म आमाको जिम्मामा हुने र बालिग भएपश्चात उसले आफ्नो निर्णय लिन सक्ने जस्ता प्रावधान छ ।
सम्बन्ध विच्छेद भएका पतिपत्नीले फेरि एकअर्कासँग सम्बन्ध जोड्न खोजे कानूनी प्रावधान के छ त ? भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतकी अधिवक्ता तारा खनाल भन्नुहुन्छ– ‘हाम्रो कानूनले सम्बन्ध विच्छेदको व्यवस्था त गऱ्यो तर सम्बन्ध विच्छेद भएकै व्यक्तिसँग पुनः सम्बन्ध जोड्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भने केही पनि गरेको छैन ।
तर मुलुकी देवानी संहिता लागू भएपछि पतिपत्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहे भने फिरादपत्र दिएको एक वर्षसम्म उनीहरूलाई मिल्नको लागि मौका दिएको छ ।’ उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ– ‘फिरादपत्र दिएपछि अदालतले ती पतिपत्नीलाई एक वर्षसम्म ‘अब्जर्भ’मा राख्छ, यो भनेको मिल्न सक्ने सम्भावना छ कि भन्न खोजिएको हो । यदि एक वर्षमा दुवै जना मिले भने राम्रो भयो मिलेन भने सम्बन्ध विच्छेदकै मुद्दामा जानुपर्छ ।’
हुन त कानूनले विच्छेद गराउने मात्रै होइन जोड्ने काम पनि गर्छ । तर, सम्बन्ध विच्छेदको बदलिँदो स्वरुप र विच्छेदपछि पनि सम्बन्ध हुन सक्छ है भन्ने अनुमानको आधारमा पनि कानूनमा व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ ।(रसना ढकालले केहि महिना अगाडी लेखेको यो लेख घटना र बिचारमा छापिएको थियो हामीले त्यसैलाई साभार गरेका हौ)
Prevफिल्म खेलाउने भन्दै छोरीलाई केटाले लिएर फ रार भएपछि आमा बुबाको रु वाई (भिडियो हेर्नुस्)
nextनेपालमा आएर केहिदिन बिताएका अनुपम खेरले किन नेपालको बारेमा यस्तो लेखे ?